China Soda Ash Nlụpụta na Factory | Ntinye
Aha ngwaahịa: SODA ASH
Aha Chemical: Common Soda, Sodium Carbonate
Ezinụlọ Ezinaụlọ: Alkali
Nnukwu njupụta: 60 lbs / cubic ụkwụ
Oge Esi: 854ºC
Solubility na mmiri: 17 g / 100 g H2O na 25ºC
Kwụsi ike: Stable
Solubility na mmiri: 17 g / 100 g H2O na 25'C
Sodium carbonate bụ ntụ na-acha ọcha na-enweghị isi ma ọ bụ ihe na-enweghị ntụ na ụlọ okpomọkụ. Na mmiri na-ekpo ọkụ, ekpughere n'ikuku ji nwayọọ nwayọọ na-amịkọrọ mmiri 1mol / L (ihe dị ka 15%).·H2O, Na2CO3·7H2O na Na2CO3·10H2O.
Sodium carbonate na-adị mfe soluble na mmiri na glycerin.
Ngwọta mmiri nke sodium carbonate bụ alkaline na corrosive ruo n'ókè ụfọdụ, ma nwee ike okpukpu okpukpu abụọ na acid, kamakwa ụfọdụ nnu calcium, nnu barium okpukpu abụọ mmeghachi omume. Ngwọta bụ alkaline ma nwee ike gbanwee phenolphthalein uhie.
Nkwụsi ike siri ike, mana enwere ike ire ere na oke okpomọkụ, iji mepụta sodium oxide na carbon dioxide; Exposurenweta ikuku ogologo oge nwere ike ịmịkọrọ mmiri na carbon dioxide na ikuku, mepụta sodium bicarbonate, ma mepụta mgbochi siri ike.
Hydrolysis mmeghachi omume
Ebe ọ bụ na a na-ekpo ọkụ sodium carbonate na mmiri mmiri, ion ionized carbonate na-ejikọta ion hydrogen na mmiri iji mepụta ion bicarbonate, na-eme ka mbelata ion ion hydrogen na ngwọta ahụ, na-ahapụ ion ionized hydroxide, ya mere pH nke ihe ngwọta bụ alkaline .
Mmeghachi omume na acid
Sodium carbonate na-emeghachiri ihe dị iche iche nke acid. Were hydrochloric acid, dịka ọmụmaatụ. N'ihe zuru ezu, a na-emepụta sodium chloride na carbonic acid, a na-erekwa carbonic acid na-ejighị n'aka ozugbo na carbon dioxide na mmiri.
Mmeghachi omume na alkali
Sodium carbonate nwere ike okpukpu abụọ mebie ya na calcium hydroxide, barium hydroxide na ntọala ndị ọzọ iji mepụta mmiri na sodium hydroxide. A na-ejikarị mmeghachi omume eme ihe na ụlọ ọrụ iji kwadebe soda caustic.
Mmeghachi omume na nnu
Sodium carbonate nwere ike okpukpu abụọ mebie ya na nnu calcium, nnu barium, wdg, iji mepụta mmiri na nnu sodium ọhụrụ:
Ihe Ndepụta (Soda Ash Dense ) Ndepụta (Soda Ash Light)
Total alkali (àgwà nta nke Na2CO3 akọrọ ndabere) 99.2% nkeji 99.2% nkeji
NaCI (ezigbo ọnụọgụ nke ntọala NaCI nke akọrọ) 0.70% max 0.70% max
Fe quality nta (akọrọ ndabere) 0,0035% max 0,0035% max
Sulfate (njirimara dị oke nke SO4 ndabere akọrọ) 0.03% max 0.03% max
Mmiri-ngwa-ngwa umi na àgwà nta 0.03% max 0.03% max
Mkpokọta njupụta (g / ml) 0,90% nkeji
Mpempe akwụkwọ, 180μm sieving fọduru 70.0% nkeji
Nkwadebe nke Soda Ash
E nwere ụdị ụzọ amoniaị Alkaline abụọ na usoro Alkaline jikọtara ọnụ. 1)Amonia usoro alkaline
Ọ bụ otu n'ime ndị isi ụzọ maka ulo oru mmepụta nke Soda Ash .Ọ e ji ọnụ ala Efrata, mfe nnweta na imegharị ihe maka iji nke amonia (obere ọnwụ; Adabara maka uka mmepụta, mfe iji ígwè ọrụ na akpaaka) .However, akụrụngwa itinye n'ọrụ ọnụego nke usoro a bụ ala, karịsịa na NaCl ọnụego.The isi mmepụta Filiks na-agụnye brine nkwadebe, nzu nzu nke calcination, amonia brine nkwadebe, carbonation, nkewa na calcination nke arọ alkali, amonia mgbake, wdg Usoro mmeghachi omume bụ dị ka ndị:
CaO + H2O = Ca (OH) 2 - Achịkọta＋Q
2) Cagbachi Ausoro lkaline
Site na nnu, ammonia na carbon dioxide nke ihe eji emeputa ihe nke ammonia nke ihe ndi ozo, ihe ndi ozo nke soda ash na ammonium chloride, ya bu, imeputa ihe ndi ozo nke soda ash na ammonium chloride, nke ana akpo "mejuputara alkali meputa" ma obu alkali "isi mmeghachi omume bụ:
* Dịka oge nke ịgbakwunye akụrụngwa na mmiri ozuzo mmiri dị iche iche nke ammonium chloride, enwere ọtụtụ usoro maka imepụta alkali agwakọtara. Mba anyị na-ejikarị eme ihe: otu oge carbonization, ugboro abụọ amonia absorption, otu nnu, usoro ammonium dị ala dị ala.
1)Thelọ ọrụ ndị na-ahụ maka iko bụ nnukwu ngalaba soda, soda ọ bụla nke iko soda nke soda soda. Tumadi eji ise n'elu iko, picture tube iko shei, ngwa anya iko, wdg
2) Enwekwara ike iji ya na ụlọ ọrụ kemịkalụ, ngwongwo na ngalaba ndị ọzọ .Iji soda eme ihe nwere ike belata uzuzu nke alkali, belata oriri nke akụrụngwa, melite ọnọdụ ọrụ, melite ogo ngwaahịa, belata nsị nke alkali uzuzu on refractory ihe, na ogologo ọrụ ndụ nke n'ekwú ọkụ.
3)Dị ka echekwa, neutralizer na mgwakota improver, ike ga-eji na achịcha na pasta nri, dị ka mmepụta mkpa nke kwesịrị ekwesị ojiji.
4) Ejiri dị ka ihe nhicha maka ịsacha ajị anụ, nnu salts na ọgwụ, dị ka alkali na tanning akpụkpọ.
5) Ejiri ya na ụlọ ọrụ nri, dị ka neutralizer, ihe na-eko achịcha, dị ka imepụta amino acid, soy sauce na nri noodle dị ka achịcha steamed, achịcha, wdg. A pụkwara ịkwadebe ya n'ime mmiri alkaline ma gbakwunye na pasta iji mee ka ọ dịkwuo elu Enwere ike iji sodium carbonate mepụta monosodium glutamate.
6) Ihe pụrụ iche maka TV agba
7) Ejiri ya na ụlọ ọrụ ọgwụ dị ka antidote acid na osmotic laxative.
8) A na-eji sodium carbonate anhydrous mee ihe maka mwepụ kemịkal na kemịkalụ kemịkalụ, ọla kọpa na-enweghị electroless, aluminom etching, aluminom na alloy electropolishing, aluminom kemịkalụ oxidation, phosphating mgbe emechiri, usoro nchara nchara, iwepụ electrolytic nke mkpuchi chromium na mwepụ nke ihe nkiri chromium, na-ejikwa ya na-eji ọla kọpa mee, ígwè plating, ígwè plating alloy electrolyte
9) Metallurgical ụlọ ọrụ maka gbazee agbanwe agbanwe, ịnweta nhazi na flotation gị n'ụlọnga, steelmaking na antimony gbazee dị ka a desulfurizer.
10) Mbipụta na dyeing ụlọ ọrụ na-eji dị ka a mmiri softener.
11) Ọ na-eji na akpụkpọ anụ ụlọ ọrụ na degrease raw akpụkpọ anụ, neutralize chrome tanning akpụkpọ anụ ma melite alkalinity nke chrome tanning mmanya.
12) Ntụziaka maka mmezi nke acid na nyocha ọnụọgụ. Mkpebi nke aluminom, sọlfọ, ọla kọpa, mbu na zinc.Urin na ule glucose ọbara niile. Analysis nke silica cosolvent na ciment.
Nkwakọ ngwaahịa: Jumbo bag size: 95 * 95 * 125-110 * 110 * 130；
All mbukota akpa bụ eyi elu akpa na Pee n'ime akpa;
Akpa nke mpụta nwere mkpuchi iji kpuchido ogo ngwaahịa;
Jumbo akpa na nchekwa nchekwa 5: 1, nwere ike izute ụdị njem dị anya.
Soda Ash ìhè 21.5MT 22MT 15MT 20MT 2FCL
Nke gara aga: Potassium Bromide
Osote: Sodium Bicarbonate
Calcium Bromide Ngwọta, Hydrosulfite De Sodium, Calcium Bromide mmiri mmiri, Natrium Hydrosulfite, Calcium Bromide Anhydrous, Hydrosulfite,